“Dalle” tsy misarona Atahorana handratra olona
Saika ahitana asa fanamboaran-dalana avokoa manerana an’Antananarivo amin’izao, indrindra ireo tsy maintsy hanaovana fanitarana toy ny eny Anosibe, Antananarivo Atsimondrano...
Ankoatra ireo tatatra vaovao vao nosokafana dia toerana maro no ahitana dalle tsy misarona nefa tena mahadifotr’olona tokoa. Ho an’ny etsy Soanierana, ohatra, izay toerana be olona mifamevivezy dia dalle roa raha kely no mihanjahanja. Ny iray amin’ireo anefa dia eo amin’ny toby fiantsonan’ny taksibe mihitsy nefa raha vao migadona ny amin’ny 4 ora hariva dia efa feno mpianatra mijanona eo sady misangy. Mangataka ny tokony hanaronana azy ireo haingana ireo olona mampiasa iny lalana iny sy ireo ray aman-drenin’ny mpianatra. Mikasika ity asa fanamboarana eto an-drenivohitra ity, fantatra fa amin’ny volana septambra vao hifarana tanteraka izy io ka betsaka ireo toromarika mety hiova.